Waa Kan Tababaraha Lama Filaanka Ah Ee Uu Madaxweynaha Barcelona Taageeraha U Yahay Ee Uu Kooxda Keeni Karo - Laacib
HomeWararka CiyaarahaWaa Kan Tababaraha Lama Filaanka Ah Ee Uu Madaxweynaha Barcelona Taageeraha U Yahay Ee Uu Kooxda Keeni Karo
Waa Kan Tababaraha Lama Filaanka Ah Ee Uu Madaxweynaha Barcelona Taageeraha U Yahay Ee Uu Kooxda Keeni Karo
September 30, 2021 Apdihakem Omer Adam
Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Joan Laporta ayaa lagu soo warramayaa inuu taageere u yahay isla markaana uu la dhacsan yahay macalinkii hore ee kooxda Juventus ee Andrea Pirlo.
Pirlo ayaa markiisii ugu horreysay abid waayihiisa tababarenimo ka bilaabay Juventus, kooxda ka dhisan magaalada Turin oo marka horeba loo arkayay inay ku deg-degtay magacaabistiisa ayuu kusoo fashilmay iyaga oo ugu dambayn dhammaadkii xilli ciyaareedkii hore shaqada ka caydhiyay.
Xilli ciyaareedkii hore ayuu Pirlo seejiyay Bianconeri horyaalka Serie A markii ugu horreysay mudo sagaal xilli ciyaareed oo ay joogto ugu soo guuleysanayeen kaddib iyaga oo maalintii ugu dambaysay xilli ciyaareedka galay booska afraad sidaasna ugu soo baxay Champions League.
Walow sumcadiisa tababarenimo ay hoos ugu dhacday gegida Allianz Stadium oo ahayd isla halkii uu ka bilaabay uun haddana cabqarigii hore ee khadka dhexe ayaa la xusayaa inay jiraan shaqsiyaad la dhacsan oo ka tirsan boodhka sarre ee Barcelona.
Sida uu sheegayo raadiyaha Catalunya Radio, maamulka Blaugrana oo uu kamid yahay madaxweyne Laporta ayaa ah kuwo taageere u ah Andrea.
Warar maanta la helayay ayaa sheegaya in tababare Ronald Koeman mustaqbalkiisa Barcelona maanta go’aan laga gaadhi doono kaddib guuldarradii 3-0 ka ahayd ee xalay kasoo gaadhay SL Benfica oo ay marti u ahaayeen.